Aer Lingus dia manamafy ny zotra Cork vaovao 2
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Aer Lingus dia manamafy ny zotra Cork vaovao 2
Faly ny seranam-piaramanidina Cork manamafy fa ny mpiara-miombon'antoka efa ela Aer Lingus dia hampiditra sidina mankany Dubrovnik sy Nice manomboka amin'ny fahavaratra 2019, miaraka amin'ny fanambarana amin'ny andro hanombohan'ny zotram-piaramanidina serivisy mandritra ny taona mankany Lisbon avy ao an-tanàna. Ity fanoloran-tenan'i Aer Lingus an'i Cork ity dia midika fa ny zotram-piaramanidina dia handeha 20 lalana avy amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny fahavaratra manaraka.
Ny serivisy vaovao mankany Nice sy Dubrovnik dia alefa indroa isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny A174 misy zotra 320 an'ny zotram-piaramanidina. Hanomboka ny 1 mey ny serivisy ho an'i Nice, miasa ny Alarobia sy Alahady, ary i Dubrovnik kosa dia hanomboka amin'ny 4 Mey, miaraka amin'ny fialana amin'ny talata sy asabotsy. Nalefa ny 26 Oktobra, ny sidina Lisbon dia alefa indroa isan-kerinandro amin'ny alatsinainy sy zoma, ary io no lasa renivohitra eropeana fahenina notompoina tsy an-kijanona avy any Cork amin'ity ririnina ity, nanatevin-daharana ny serivisy efa misy any Amsterdam, Cardiff, Edinburgh, London ary Paris. Miaraka amin'i Aer Lingus miasa ihany koa Lisbonona ho an'ny voalohany amin'ny fahavaratra manaraka, midika izany fa ny làlambe telo an'ny mpitatitra dia handray anjara amin'ny seza 41,700 2019 amin'ny tsenan'i Cork amin'ny tampon'ny fahavaratra XNUMX.
Niall MacCarthy, Tale mpitantana ny seranam-piara-manidina ao Cork, dia nilaza hoe: “I Aer Lingus no mpanjifa maharitra indrindra eto aminay sy eto Cork Airport. Faly izahay amin'ity fanitarana ity sy ny fanampiana zotram-piomanana roa vaovao ho an'ny fahavaratra 2019. Vinavinainay fa i Nice sy Dubrovnik dia hanjary be mpitia amin'ny mpandeha manerana ny faritra atsimon'i Irlandy, manambatra ny traikefa ananan'ny mpandeha mora any amin'ny seranam-piaramanidina Cork miaraka amin'ny fijanonan'ny fiara mora ary ny manintona an'ireo toerana lavitra. Miasa mafy izahay miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka fiaramanidina mba hitombo sy hampivelatra ny safidy avy amin'ny seranam-piaramanidina Cork ary ity fanambarana ity dia mitondra fito ny isan'ny toerana vaovao nambara tao anatin'ny herinandro maromaro ho an'ny fahavaratra manaraka. Manombana ny fitomboan'ny mpandeha 7% izahay amin'ny 2019 izay, na eo aza ny Brexit, dia haneho fahombiazana lehibe indray amin'ny taona ho avy. "
Ity vaovao farany nataon'i Aer Lingus ity dia miverina ao ambadiky ny herinandro vitsivitsy mahomby ho an'i Cork. Vao haingana dia nanamafy i Ryanair fa ho an'ny fahavaratra 2019 dia hanomboka sidina mankany Budapest, Malta, Naples ary Poznan. Amin'ny 28 Oktobra dia hanomboka serivisy vaovao dimy heny isan-kerinandro any London Luton izy, miaraka amin'ny làlana farany izay miteraka fahombiazan'ny renivohitra UK mitombo 4.1% amin'ity ririnina ity. Manampy an'izany, Air France, mpiara-miombon'antoka vaovao amin'ny taona 2018, dia nanamafy fa hanohy ny làlany mahomby mankany Paris CDG ka hatramin'ny ririnina, ary nanangana serivisy isan'andro amin'ny volana Mey. Ny fampiasam-bolany eo amin'ny tsenan'i Cork dia midika fa amin'ny ankapobeny, ny fahafaha-miasa mankany Paris avy any Cork amin'ny W18 / 19 dia hitombo 71% raha oharina amin'ny vanim-potoana iray tamin'ny taon-dasa, miaraka amin'ny Air France izay manome fifandraisana amin'ny tamba-jotra misy toeran-180 amin'ny alàlan'ny foibeny ao Paris CDG.
Ny seranam-piaramanidina Václav Havel Prague dia hanolotra fifandraisana amin'ny toerana 114
Nirehitra sy feno fankasitrahana: Sefon'ny HTA
60 minitra lasa izay